Jamacada Modalverben Lecture
Saaxiibbada qaaliga ah, casharkaan Jarmalka ah modalverben Waan soo qaadan doonnaa mowduuca. Jarmalka modalverben loo yeedhay 6 ficil gacan yare leeyahay. Kuwaas waxaa loo yaqaan Modalverbens ama shaqallo qaab ah. In kasta oo shaqalladaan gacan-ku-rimiska ahi macno u samaynaynin iskood, waxay beddelaan ama ballaadhiyaan macnaha falka dhabta ah ee xukunka.
Jarmal modalverben Shaqaalahan kaaliyeyaasha ah, ee loo yaqaan, waxaa lagu isku dubbariday iyadoo loo eegayo maaddada ku jirta jumladda, kiiskanna, falka dhabta ah ee xukunka waxaa laga helaa mid aan dhammaad lahayn, oo ah, dhammaadka jumlada iyada oo aan wax isku xidhin ah.
Ficilladan sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa inay yihiin falka ugu weyn ee xukunka. Falalkan, oo loogu yeero Modalverben oo Jarmal ah, iyo macnahooda guud iyo isku xirnaantooda sida ay qabaan shaqsiyaadka xilligan jira ayaa hoos lagu sheegay Jadwalka hoose modal modalverbi Marka loo isticmaalo macnaheedu yahay rabitaan-rabitaan, badanaa waxaa loo isticmaalaa sidii möchten halkii laga noqon lahaa mögen nolol maalmeedka. Sababtaas awgeed, isku xirka falka möchten, oo ay weheliso moodeellada, waxaa la siiyaa miiska agtiisa.
Markaa macnahee ayuu Modalverben ku darayaa xukunka? Ma jiraan shaqallo modalverben ah oo kaabayaal ah afkeenna Turkiga?
Dabcan way jirtaa. Sidoo kale, aan ku siino tusaalooyin sida soo socota:
Waxaan rabaa in aan aado guriga.
Waxaan rabaa in aan cuno keeg.
Waxaan ku dabaalan karaa barkadan.
Waan hagaajin karaa gaarigaan.
Waan gabyi karaa
Waxaan raaci karaa baaskiil
Si dhakhso leh ayaan u ordi karaa
Waxaad u adeegsan kartaa weedho sida kor ku qoran af Jarmal. modalverben Waxaan u ekeysiin karnaa jumladaha la abuuray iyadoo la adeegsanayo.
Haatan aan wax ka baranno ficilladan caawimaad ee loo yaqaan 'modalverben' ee Jarmalka iyo macnahooda.
dürfen in loo oggolaado in uu sameeyo, awood u yeesho, awood u yeesho, dhiirranaado
können karti, karti, garasho, garasho, karti, awood, karti
mogeny inaad rabto, jeclaato, jeclaato, u janjeerto, jeclaato, jeclaato, ahaato
müssen waa in la sameeyo, waa in la sameeyo, waa in la sameeyo, waa in / waa in
jilicsan in laga codsado in la sameeyo, in loo baahdo, in loo baahan yahay, waa in / in la yiraahdo
wollen rabitaan, rabitaan, dalab, baahi u baahan
Jarmal modalverben taas oo ah, shaqallada caawinta ah waa sida kor ku xusan. Sida aad halkan ku arki karto, waxaa jira kala duwanaansho yar yar xagga macnaha ah oo u dhexeeya Modalverbens. tus dürfen inaad karti yeelato, inaad haysato ogolaansho iyo ruqsad aad ku sameyso, inaad hesho ogolaansho, oo micnaheedu yahay isku mid können Waxaa loo adeegsadaa in loola jeedo karti waxqabad, awood iyo awood, karti, karti, karti.
LIFAAQA KU SAABSAN DADKA Jarmalka EE MODALVERBEN
XISBIYADA dürfen können mogeny müssen jilicsan wollen
I Darfur kann mag muss soll doono
du darfst kannst majest waajib kalgacal dardaaran
er / sie / es Darfur kann mag muss soll doono
waxaan dürfen können mogeny müssen jilicsan wollen
EXP barar koorta maalqabeen musst sol yeey
sie dürfen können mogeny müssen jilicsan wollen
Aug dürfen können mogeny müssen jilicsan wollen
Jadwalka kor ku xusan modalverbenTalaalada s waxaa loo bixiyaa hadba qofka Si loo isticmaalo modalverbens si sax ah weedhaha, modalverbenWaa lagama maarmaan in la xafido rasaasta dadka sida shaqsiyaadka loo sheego. Waxaan sidoo kale ku arki karnaa miiskan sawir weyn:
Jarmal Modalverbens waa sida kor ku xusan. Kuwani Modalverbens waxaa badanaa loo isticmaalaa weedho leh falka ugu weyn. Modalverbens weedho way soo jiitaan mawduuca iyo kiiskan ficilka dhabta ah ee xukunka aan dhammaad lahayn kuwaas oo iyada oo aan xabbadu dhicin laga helo dhamaadka xukunka. Modalverbens sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa shaqarka ugu weyn weedh ahaan. Xaaladdan oo kale, waxay caadi ahaan ku yaalliin halka uu falku ka dhacayo.
kor ku xusan modalverben Waxaan siinay isku xidhka, markaa haddii aan u adeegsanayno modalverben iyo falka dhabta ah jumlad, weedh labadaba modalverben Haddiise ficil dhab ah la helayo, markaa Modalverben waa lagu xujayn doonaa iyadoo loo eegayo mowduuca, falka dhabta ahna wuxuu ku dambayn doonaa xukunka jumlad ahaan bilaa xisaab la'aan. Waxaan horeyba u aragnay qaabka ficil ahaanta ficil Jarmal u yahay iyo sida ficil loogu xirayo Jarmalka marka loo eego shaqsiyaadka, casharkeenna isku xidhka falka Jarmalka. Kuwa aan garanayn way aqrin karaan casharkaas.
Haatan aan ku qorno qaar ka mid ah jumladaha jarmalka isbarbar dhigaya sharaxaadayada.
Jumlado Jarmal Modalverben ah
Aynu qorno jumlado toosan adoo adeegsanaya modalverben
SUBJECT + MODALVERB + SOOYAAL KALE
Waan dabaalan karaa
Waad dabaalan kartaa
Meryem way ordi kartaa.
Waan ordi karnaa.
Aynu qorno jumladaha su'aasha adoo adeegsanaya Modalverben
Ma dabaalan karaa?
Ma dabaalan kartaa
Ahmet ma ordi karaa?
Ma ordi karnaa?
Aynu qorno jumlado diidmo ah adoo adeegsanaya Modalverben
Runtii waan ka xumahay.
Ma dabaalan karo
Waxba kama qaban kartid.
Ma dabaalan kartid
Mehmet ma ordi karo.
Ma ordi karno.
Weedho isku dhafan oo ku saabsan Modalverben
Hadda aan sameyno jumlado isku dhafan, weedhaheenna waxaa loo turjumi karaa Turki ahaan xilligan xaadirka ah ama hadda taagan. tusaale ahaan ich kann rennen xukun "Waan ordi karaa"Sidii" ama "Waan ordi karaaWaxaan u tarjumi karnaa sida ”.
Ich möchte keinen Kaffee la kariyey.
Ma doonayo inaan qaxwo cabbo.
Sida loo sameeyo Pizza essen?
Ma rabtaa inaad cuntid pizza?
Wir möchten ins Tiyaatarka gehen.
Waxaan rabnaa inaan aadno tiyaatarka.
Waxaad rabtaa inaad aqriso buug.
Si quruxsan ayaan u rinjiyeyn karaa.
Wuu wadi karaa si fiican.
Si dhakhso leh ayaanu ordi karnaa
Ma aha wax la yaab leh.
Ma dabaalan karo.
Runtii sidaas ma aha.
Ma kici karo subaxa hore.
Waad garaaci kartaa biyaano waadna heesi kartaa.
Saaxiibbada qaaliga ah, casharkaan, waxaan ku baranay Modalverbens, oo ah mowduuc muhiim u ah Jarmalka, waxaan ku aragnay Modalverbens oo Jarmal ah, waxaan baranay sida loo toogto Modalverbens sida ay shaqsiyaad leeyihiin, modalverben adoo adeegsanaya weedho toosan, weedho su'aal iyo weedho taban.
Adiguba modalverbenWaxaad ku sameyn kartaa jumlado kala duwan shaqallo kala duwan adoo adeegsanaya 's.
Sidan oo kale, waxaad ku baran kartaa mawduuca Modalverben si aad ufiican oo aadan si fudud u ilaawi doonin maadada Modalverben iyada oo ay ugu wacan tahay ku celcelinta badan.
Jarmal Modalverben Waad qori kartaa wixii su'aalo ah, ra'yi ah, soo-jeedin iyo codsi ah ee aad rabto inaad wax ka weydiiso mawduuca goobta su'aalaha ku saabsan Su'aalaha oo dhan anagaa ka jawaabi doonna.
Saaxiibbada qaaliga ah, ha ilaawin inaad ku dhawaaqdo oo aad kula taliso bartayada barashada Jarmalka asxaabta kale.
Waad ku mahadsan tahay booqashada bogeena, waxaan kuu rajeyneynaa wanaag.
# Jumlado Jarmal Modalverben ah
# Weedho isku dhafan oo ku saabsan Modalverben
Tags: Fasalka 10aad modalverben, Fasalka 10aad modalverben muxaadaro, Fasalka 11aad modalverben, Fasalka 11aad modalverben muxaadaro, german modalverben weedho muunad, können, modalverb ah, Modalverben weedho tusaale, mogeny, müssen